बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ? कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ? – Khabar Samachar
बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ? कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ?
अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा वार्षिक १५०० जति बालबालिकाहरुमा नयाँ क्यान्सर हुने अनुमान गरिएको छ। बाल क्यान्सर सम्पूर्ण क्यान्सरहरुमा छैठौं र बाल स्वास्थ्य समस्याहरुमा नवौं प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या हो। नयाँ बिरामीमध्ये बाल क्यान्सरको उपचारको पहुँचमा करिब एकतिहाइ मात्र रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।नेपालमा उपचारको पहुँचमा पुगेकामध्ये करिब ७० प्रतिशत निको हुने गरेको तथ्यांक रहेको कान्ति बाल अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा विष्णु रथ गिरीले बताए।